Translator Newsletter: Fiteny very, ankizy mpandika teny sy ny maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Translator Newsletter: Fiteny very, ankizy mpandika teny sy ny maro hafa!
Voadika ny 18 Jona 2019 4:15 GMT
Miarahaba ny GV!
Tonga soa eto amin'ity fizarana Translator Newsletter ity indray! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Misy ifandraisany amin'ny famoronana ve ny fahaizana teny roa?
Pikantsary tao amin'ny youtube.com
Izany no fanontaniana ao an-tsain'i Jason Silva rehefa miresaka momba ny fibeazana tamin'ny fampiasana ny fiteny Espaniola sy Anglisy, ary avy amin'ny kolontsaina roa samihafa. Mahatonga antsika hijery izao tontolo izao amin'ny fomba samihafa ve ny miteny fiteny mihoatra ny iray? (Spoiler alert: Eny.) Jereo ato ny lahatsary feno raha te-hahafatantra hoe nahoana ary amin'ny fomba ahoana!
Fampianarana amin'ny fiteny roa
Pikantsary avy amin'ny http://www.theatlantic.com/
Nisandratra tao Etazonia ny fandaharana amin'ny fiteny roa, saingy nisy ny adihevitra manodidina izany. Jereo ity resadresaka mahafinaritra niarahan'ny Atlantic tamin'i Teresa Chávez, mpampianatra lehiben'ny fandaharana “Dual Language Immersion” ao amin'ny Little Canada Elementary ao Minneapolis, Minnesota ity. Mitantara ny zava-drehetra mikasika ny hoe nahoana ny fampianarana amin'ny fiteny roa no zava-dehibe mba hamolavolana ny fomba fampianarana manodidina ny endrika samihafan'ny fiteny iray, sy maro hafa!
Nihalehibe tamin'ny fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://news.medill.northwestern.edu/
Amin'ny maha zanaky ny mpifindra monina lehibe tao New York City, lehibe tamin'ny fandikan-teny ho an'ny ray aman-dreniko sy ny raibe sy renibeko aho (ary mbola manao izany andraikitra izany indraindray amin'izao fotoana izao). Saingy inona koa no momba ny andraikitra amin'ny maha mpitari-dalana ny ray aman-dreny ao amin'ny tranon'izy ireo vaovao? Shanshan Wang manome antsika topi-maso momba ny fiainan'ny ankizy rehefa lasa mpandika teny amin'ny fotoana feno ho an'ny fianakaviany izy ireo, tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe”Ankizy Mpandika teny ho an'ny Ray aman-dReniny izay tsy dia mahay miteny Anglisy.“
Fiteny very hita indray
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.smithsonianmag.com/
Araka ny voalazan'ny Smithsonian, “vao haingana no nosoratana miadana tsara indray ny tantara amerikana.” Fantatra fa niteny fiteny dimy ireo teratany Amerikanina mipetraka any afovoan-tanin'i Massachusetts izay noheverina taloha fa mampiasa fiteny tokana ihany! Vakio ato ny lahatsoratra feno eto ary eritrereto hoe – inona ireo fiteny hafa very izay mety mbola tsy fantatsika?